funny – Healthy Life Journal
ဆရာဝန်ထံသို့ စိတ်ကျန်းမာရေးဝေဒနာရှင်တစ်ဦး ရောက်လာတယ်။ “ဘာတွေ ခံစားရသလဲ ပြောပါဦး” “ဘာမှ စားလို့မရဘူး ဆရာ” “စားချင်စိတ်မရှိတာလား” “မဟုတ်ဘူး ဆရာ၊ စားလို့မရတာပါ” “ဘာကြောင့်လဲ၊ သွားကိုက်လို့လား၊ အစာမျိုလို့ မရတာလား၊ ဗိုက်အောင့်တာလား” “မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ . ....
အချိန်မီလေး . . .
ဆေးခန်းသို့ သားအဖနှစ်ယောက်လာပြရာ ဆရာဝန်က လူနာကလေးငယ်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး – “တော်သေးတာပေါ့၊ ခင်ဗျား အချိန်မီလေးရောက်လာပေလို့” ဆရာဝန့်စကားကြောင့် ကလေးအဖေမှာ သားဖြစ်သူအတွက် စိတ်ပူသွားကာ- “ဟုတ်လားဆရာ . . သားကဘာဖြစ်တာလဲ၊ နောက်ကျရင် ဘာဖြစ်နိုင်လဲ” “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာ၊ ခဏနေရင် ကျွန်တော့်ဆေးခန်းပိတ်တော့မှာမို့...
“ မင်းတို့အရမ်းချစ်ရတဲ့ ဦးလေးဆုံးသွားပြီဆို… နှလုံးရောဂါနဲ့ပဲလား” “မဟုတ်ပါဘူး… သူ့ကိုနှလုံးရောဂါမဖောက်လာအောင် သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပေးထားတာ” “ဒါဆို ဘယ်လိုဆုံးသွားရတာလဲ” “ရုတ်တရတ်ဆို လန့်ပြီးနှလုံးဖောက်သွားမှာစိုးလို့ မီးအရေးပေါ် အချက်ပြခေါင်းလောင်းစနစ်ကို ပိတ်ထားတာလေ… အိမ်မီးလောင်တာ မသိလိုက်ဘဲပါသွားတာ”
လူနာ။ ။ ကျွန်တော် ဒီရက်တွေအတွင်း ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ဘူးဆရာ။ ဆရာဝန် ။ ။ အိစက်ညက်ညောတဲ့ အိပ်ရာပေါ်မှာ အိပ်ပါ၊ တိုးညင်းတဲ့ တေးသီချင်းလေးဖွင့်ထား၊ အခန်းကို အမှောင်ချထား . . လူနာ ။ ။ ဒါပေမဲ့...
မြင်းစီးဝါသနာရှင်တစ်ဦး မတော်တဆဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာလေသည်။ “ခင်ဗျားမြင်းစီးရတာ အရမ်းဝါသနာပါတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် ခင်ဗျားမြင်းကို ထားခဲ့သင့်ပြီထင်တယ်ဗျ” “ဆရာရယ်… ဒါက ကျွန်တော့်ဘ၀ပါ.. ကျွန်တော့်ကို မြင်းပြန်စီးနိုင်အောင် ကူညီပါဆရာရယ်” “မြင်းပြန်စီးနိုင်အောင် ကူညီလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားမြင်းကြီးကို အခန်းထဲထိခေါ်လာတော့ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားကို...
စေတနာအလွန်ကောင်းသော ပရဟိတသမားကြီးနဲ့ လူတချို့စကားပြောနေကြလေသည်။ “ ကျွန်တော် လူပျိုဘ၀ထဲက လူသားတိုင်းအပေါ်မှာ စေတနာမေတ္တာအပြည့်ထားပြီး ကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်” “ဒါဆို ဦးလေးက အခုချိန်ထိ လူဆိုးလူကောင်းမခွဲဘဲ လူတိုင်းပေါ်မှာ စေတနာအပြည့် ထားခဲ့တယ်ပေါ့လေ” “ အဲ .. အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ တစ်ယောက်လျော့သွားတယ်ဗျ”...
Healthy Life journal ဆေးရုံမှာ ခေါင်းကွဲလို့ ချုပ်ထားရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးထံ လူနာသွားမေးရာ လူနာက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ပြောပြတယ်။ “ငါစိတ်ထင်ရင် အမှန်ဖြစ်တယ်ကွာ . . ညတုန်းက စက်ဘီးနဲ့ အရက်တစ်ပုလင်း သွားဝယ်တယ်။ အရက်ပုလင်းကို စက်ဘီးရှေ့ခြင်းထဲထည့်ရင် ငါစဉ်းစားမိတယ်။...
မိန်းမ လိုက်နာရင် ပြီးတာပဲ . . .
ဆရာဝန်က အမျိုးသမီးဖြစ်သူကို အသေးစားခွဲစိတ်မှုပြုပြီးနောက် အမျိုးသမီးနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ “အနာကျက်ဖို့ တစ်ပတ်လောက် အချိန် ယူရမယ်၊ တစ်ပတ်အတွင်း လိင်ဆက်ဆံမှုမပြု ပါနဲ့” ဆရာဝန်အခန်းက ထွက်လာပြီး ဇနီးသည်က သူ့ခင်ပွန်းကိုပြောတယ်။ “ဆရာပြောတာ ရှင်ကြားတယ်နော်” “အဲဒါ မင်းကို ပြောတာလေ”...
ဆိုင်သို့ အမြဲလာနေကြဖောက်သည်ဝင်လာသည်နှင့် စားပွဲထိုးကောင်လေးက သွားမေးသည်။ “ထုံးစံအတိုင်းအမဲသားပြားကင်နဲ့ကော်ဖီအေးပဲလား အကို” “ အေးကွာ စားချင်ပေမယ့် ငါဝလာလို့ ဆရာဝန်က အစားတွေ ရှောင်ခိုင်းထားတယ်။ ဒီနေ့တော့ အသီးအရွက်ပါတာလေး စားမယ် ကွာ . . .” “ဟုတ်ကဲ့ပါ ....
ပူပင်သောကများနေသလား . . .
– ငွေကြယ်စင်ယံ လေ့လာမှုအရ အမျိုးသမီး ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းကအရာရာကို အစဉ်းစားလွန်နေတတ်တယ်လို့ လေ့လာမှုအရသိရပါတယ်။ ဒီလို စဉ်းစားလွန်တာက ဦးနှောက်ကိုပူပင်သောကတွေနဲ့ ထိခိုက် စေတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်စူစန်က ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို အဖြေထွက်ဖို့ စဉ်းစားနေရတဲ့အခါ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို သုံးသင့်ပါတယ်။...